1. Makoramu mana-maviri-humburumbira dhizaini dhizaini, ine kuomarara kwakanaka, inogona kunyatso simbisa iko kurongeka kwemuchina, uye chengetedza yunifomu mbiri-simba kuburitsa pane chero chinzvimbo checheka nzvimbo;
2. Intermittent kamwe-sitiroko mashandiro, maviri-ruoko mabhatani akaomeswa, uye chimbichimbi kumisa chishandiso chinopihwa kuti chengetedze kushanda kwakachengeteka;
3. Iyo yekucheka muforoma yekumisikidza iri nyore, yakarurama, uye iyo yekucheka simba iri kumhanya-kumhanya uye nyore;
1. Kuvhiya kwacho kuri nyore uye kunochengetedza vashandi, chiyero chekutadza chakadzika, simba rekucheka rakasimba, uye mutoro unotyoka kumhanya unokurumidza, kupfuura ka1000 nguva paawa.
2. Knife muforoma yekumisikidza chishandiso, chepamusoro uye chakadzika banga banga kugadzirisa, yakapusa, yakajeka uye inokurumidza.
3. Runyararo rwakadzikama uye rwakaderera panguva yekushanda kunovandudza nharaunda inoshanda.
4. Iyo yakanaka-yekugadzirisa mudziyo inogona nyore kuwana yakanakisa yekucheka sitiroko uye kuwedzera hupenyu hwebasa refa uye yekucheka bhodhi.
5. Pane yakachengeteka mashandiro nzira.
Oily guruu laminating muchina KP-YJ128C
1.Muchina wese wakagadzirwa nekusunungura, otomatiki kutsauka kururamisa, pre-kuomesa, kuumbika kuomesa, kutonhora kwemvura, otomatiki kutsemura, pamusoro pekupokana ichitenderera uye mamwe mauniti. Izvo zvinhu zvinoumbwa zvine zvakanakira yunifomu yekupfeka, inotsvedzerera inoumbwa, hapana kutambanudza deformation, hapana kupupuma furo, hapana kuunyana, ruoko rwakanaka kunzwa, unyoro, kugona kwemhepo kukwana, uye yakatsetseka ichitenderera.
2. Kune marudzi mazhinji ezvinhu zvinoumbwa, kunyanya zvinokodzera kupfeka nekusanganisa machira uye machira, machira asina kurukwa uye machira, machira asina kurukwa uye dehwe, chipanje uye flannel, chipanji uye dehwe, nezvimwe.
3. Kudzorera uye kusunungura kunogona kusarudza gadziriro yakakodzera maererano nezvinhu zvakasiyana;
Puri inopisa inyauka inonamatira laminating muchina TH-101A
1. otomatiki kumucheto kurongedza system, otomatiki kuenderana, kudzikisa basa.
2. Tension-yemahara yekusunungura chishandiso, hapana kuunyana, ichideredza kusimba kwevashandi.
3. Kusvikira ku80 m / min, yekumhanyisa-kugadzirwa, hapana kuomesa.
Puri inopisa inyauka inonamatira laminating muchina TH-101B
Puri inopisa inyauka inonamatira laminating muchina TH-101C
4. PUR inopisa inyauka komputa muchina michina kudzora inotora programmable PLC dhizaini uye murume-muchina interface yekudzora, humanized mashandiro uye nyore kugadzirisa.
1.CNC nemazvo kugadzira, kukwirira kwakaringana, kugadzirwa kwakanaka, mutsara wakanaka, uye kuita kwakanyanya.
2.Kunze magnetic upfu, yakachena kuchena, hapana dema kabhoni poda, kugadzikana kuita uye hupenyu hwakareba.
3. Aluminium alloy chimiro, ine yakanakisa kupisa kupisa kudzikisira kuita, kwakanaka demagnetization, uye nekukurumidza kupindura kumhanya.
4. Stable oparesheni, hapana vibration, hapana kukanganisa, hapana ruzha pasi pekutanga, kumhanya uye braking mamiriro.
Aterial: Shandisa yepamusoro 45 # musono simbi mutopota uye chiwanikwa simbi mutopota
Heating nzira: kupisa conduction mafuta, kupisa conduction mvura
Structure: Yemukati paburi ine hombe lead yemusoro-yemusoro inonaya kuyerera chiteshi kana bhachi chimiro
Kupisa Melt Glue Laminating Machine Ine Ce Chitupa, Pur Hot Melt guruu Nonwoven Laminating Machine, Kupisa Melt Glue Anonyorera, Otomatiki Inopisa Melt Glue Laminating Machine, Yakapisa Melt Glue Laminating Machine YeJasi, Pur Hot Melt Inonamatira Laminating Machine,